Soro ndị ọrụ ibe gị gwuo egwu na ụwa ọhụrụ nke akụkọ mgbe ochie, MMO na-agagharị agagharị | Gam akporosis
Ọ ka dị oke anya site na ịhụ mkpokọta MMORPGs zuru oke na gam akporo. Maka ugbu a, ewezuga ole na ole, anyị ga-enwe afọ ojuju na aha dịka World of Legends, MMORPG ọhụrụ dị na nhazi beta site na Google Play.
En World of Legends ị ga-enyocha ụwa dị egwu nke Elysia ma si otú ahụ chọpụta ihe ịtụnanya niile na ọhụụ na-echere gị. A magburu onwe aha ya na nka teknụzụ na nke ahụ ga - enyere gị aka ịmepụta ndị otu ndị mmụọ ozi ga - enyere gị aka na njem gị site na ụwa Elysia.
1 Obere MMORPG
2 Ofwa nke Akụkọ Akụkọ na onlinentanetị
3 Zụlite dike gị nke ọma
Ọ bụrụ na anyị kwuo na anyị ga-enwe afọ ojuju na aha dịka World of Legends, anyị ga-enwerịrị na na ha bụ obere nsụgharị nke MMORPGHa tọrọ dịka Ultima Online, World of Warcraft or Evercraft 2. Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ oge agafeela na PC na consoles anyị nwere MMORPG ọhụrụ, mana ọ bụ na ekwentị anyị ebe anyị na-eche ka mmadụ rute na n'ezie rutere na tebụl.
Anyị enweghị ike ileghara anya Abalị na-ezighi ezi maka gam akporo ma ọ bụ nnukwu runescape nke na nso nso a rutere OS anyị hụrụ n'anya maka mobile ngwaọrụ dị ka mma. World of Akụkọ Ifo na-eweghachi akụkụ ahụ eserese na katuunu ahụ ịkpọrọ anyị gaa aha nke ga-ebu ụzọ manye anyị ịgafe nkuzi nke anyị ga-agbanye pịa "nabata" oge niile.
Ọ gaghị adị njọ ma ọ bụrụ na ha dị mkpụmkpụ ma ha agaghị amanye anyị itinye ọtụtụ nkeji ịbụ ndị na-ekiri ekiri, ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala melite ezigbo uru nke nkuzi. A na-ahụ ụwa nke akụkọ mgbe ochie site na ụwa mepere emepe nke ị ga - enwe ike ịhụ ndị egwuregwu ndị ọzọ na - abịakwute ihe omume na ọgụ ndị ahụ; ọ bụ ezie na emeghị ihe ndị a n'oge, mana anyị banyere n'ime ụlọ ebe anyị ga-egwu naanị anyị.
Ofwa nke Akụkọ Akụkọ na onlinentanetị
Ọ bụ ya mere ọtụtụ oge anyị ji aga site na ịkọwa aha dịka nke a dị ka MMORPG, ebe ọ bụ na omume ahụ na-agafe ụlọ, kama inwe ike ịhụ ndị egwuregwu ka ha na-alụ ọgụ dịka ọ na-eme na ezigbo MMORPG. Kedu ee anyị ga-ahụ ndị egwuregwu na isi map, ma chefuo ịhụ ha na ebe ndị ọzọ, belụsọ na ha so gị gwuo egwu n’ìgwè.
Ka anyị kwuo na ọgụ na-agụnye ịbịaru nso ebe ọrụ ahụ bụ ka e meghere ihe atụ ahụ. N'ezie, a ga-enwe ọgụ nke, ọ bụ ezie na akpaka maka ọtụtụ akụkụ, na-enye anyị ohere ịkwaga dike anyị iji zere mwakpo kachasị ike nke onye iro ma ọ bụ jiri ikike ndị ahụ pụrụ iche kpochapụ ndị na-akọ ọgwụ site na etiti.
N'ịgba egwuregwu n'ịntanetị nke ụdị a, ikike nwee ike ịmepụta ezinụlọ na ndị enyi ma si otú na-emeghe akpọchi ụgwọ ọrụ dị ka anyị mezue pụrụ iche ọzọ. Ọ bụ ezie na anyị katọrọ na ọ bụghị ezigbo MMORPG, ị ga-enwe mmetụta nke iso ọtụtụ ndị mmadụ na-egwuri egwu. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị mepụtara ezinụlọ.
Zụlite dike gị nke ọma
Dị ka MMORPG chere, ọ dịghị mkpa na ị nwere ike imeziwanye onye isi gị yana ndị mmụọ ahụ niile ị nwere ike itinye na ọkwa dị iche iche. Ọ dị mkpa na anyị nwere ike ịme egwuregwu ụdị egwuregwu a hazie dike anyi, kwadebe ya nke ọma na ngwa agha na ngwa agha wee nwee ike ịnweta ihe pụrụ iche. Enwere Loot, Ee.
Teknụzụ World of Legends bụ egwuregwu nke a na-elekọta nke ọma na na, ọ bụ ezie na ọ bụ na beta bipụtara na Playlọ Ahịa Google, ọ nwere nkọwa ya. Graphdị ihe osise ya na-atọ ọchị ma na-egbuke egbuke n'oge niile. Onweghikwa nsogbu ndi puru iche nke anyi ji eme ihe na nka nke ndi odide na uwa nke oma.
World of Legends bụ MMORPG ọhụrụ maka ekwentị mkpanaaka na, ọ bụ ezie na ọ dị ogologo site na ịbụ otu n'ime ndị ukwu, ọ nwere ike imeju nnukwu ọkpụkpọ egwuregwu. Have nwere ya n'efu na Playlọ Ahịa Google ka ị nwee ike ịmepụta ezinụlọ maka gị na ndị ọrụ ibe gị.
Ofwa nke akụkọ mgbe ochie
Cartodị katuun ọma
"Openwa mepere emepe"
Ọ bụghị ụwa mepere emepe
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » World of Legends bụ MMORPG ọhụrụ iji lezie anya